Yini okungafanele uyikhohlwe ngosuku olwandulela ukuqala uhambo lomkhumbi? | Izikebhe ze-Absolut
Yini okungafanele uyikhohlwe ngosuku olwandulela olwandle?
Halala, uzoqala ukuhamba ngomkhumbi kusasa. Ngicabanga ukuthi unovalo futhi ujabule kakhulu, kepha ...Ubuyekeze ukuthi usulungele yonke into? Sikusiza ukukwenza ngemizuzu engu-5 ngakho-ke uzophumula kangcono kakhulu.
Okwamanje sikucebisa ukuthi ulande isicelo senkampani uma ungakakwenzi lokho okwamanje noma ngqo hlola iwebhusayithi kwalokhu, uma kungenzeka kube nokuhlukahluka ngomzuzu wokugcina. Lokhu akujwayelekile, akwenzeki njengakudaba lwezindiza ezikhumulweni zezindiza, ama-cruise ngokuvamile athembeke kakhulu ezinhlelweni zawo, kepha uma uthathe isinqumo sokuqala isikebhe sakho kwelinye ichweba okungelona eliqala umzila kungenzeka yize kungenzeki, njengoba ngikutshele) ukuthi kube nezinguquko ngomzuzu wokugcina noma ukuhlela izinguquko. Ngakho-ke Bheka iwebhusayithi yenkampani noma uhlelo lokusebenza, lapho uzoba nehora lokugcina.
Futhi manje, sizobuyekeza umthwalo wakho kanye nesikhwama sakho ukuqinisekisa ukuthi unezinto ezibalulekile.
1 Imibhalo okufanele uyibuyekeze
2 Yini ongeke ukhohlwe ukuyifaka esikhwameni sakho
La imibhalo okufanele ukubuyekeze
Ngabe usuyenzile vele ukungena ku-inthanethi yesikebhe sakho? Zonke izinkampani sezivele zinakho lokhu futhi uzokonga isikhathi lapho ugibela. Into yokuqala okufanele uyenze faka inombolo yokubhuka, igama lakho nesibongo ncamashi njengoba livela kusiqinisekiso sakho se-cruise. Ngendlela, ngiyazi ukuthi kubonakala kusobala, kepha ukuqinisekisile ukuthi ipasipoti yakho ihlelekile, akunjalo? Ngiyazi ngesimo sowesifazane owayengakwazi ukushiya lonke uhambo lomkhumbi ngoba ipasipoti yakhe yaphela phakathi nohambo, akabanga nankinga yokungena eSpain futhi, futhi wathola enye indlela ethakazelisa kakhulu yokwenza uhambo lokuvakasha, esebenzisa izikhungo , kepha yebo uphuthelwe yizo zonke izivakashi.
Ukuthwala okubona kude kakhulu amakhophi wemibhalo yakho yomuntu siqu, njengephasiphothi, imibhalo yokukhomba futhi kwesinye isikhathi, ngisho namakhadi wesikweletu. Lokhu kusebenze njengobufakazi uma kwebiwa noma kulahleka.
Akekho othanda ukucabanga ngokusebenzisa i- umshuwalense wokuhamba, Kepha uma unenkontileka eyodwa noma ikhadi lakho lesikweletu (ngokwesibonelo) elinalo, ngincoma ukuthi ushayele inkampani futhi uqinisekise ukuthi ikumbozelani. Ngakho-ke uzozizwa uphephe kakhulu uma ngabe bekufanele uyisebenzise.
Izizathu zokuthatha umshuwalense wokuhamba emkhunjini wokuhamba ngomkhumbi
Imali yasendaweni wamazwe ozowavakashela. Yize namuhla sihamba kakhulu ngamakhadi, kwesinye isikhathi ukuze uwasebenzise kufanele uthenge okungenani, noma abafuni ukukukhokhisa ikhofi elilula ngawo, ngakho-ke letha imali evela emazweni lapho umkhumbi uzogibela khona.
Yini ongeke ukhohlwe ukuyifaka esikhwameni sakho
Yize kusebusika lapho uthatha isikebhe sakho, ungaphuthelwa i- isivikelo selanga. Ezilwandle eziphakeme nomoya wasolwandle uzomisa isikhumba sakho okuningi, ngakho-ke thatha okuhle ukuthambisa nesikrini selanga esihle kakhulu. Cishe sincoma ukuthi uphathe isikebhe esincane esikhwameni sakho, ngohambo lwansuku zonke, nesinye lapho uthatha isinqumo sokuhlala esikebheni futhi ujabulele ichibi, ukuhamba noma amathala emphemeni.
Enye into ebalulekile ukuletha ezinye izicathulo ezikahle. Labo okhululeke ngempela kubo. Ngendlela efanayo, ungakhohlwa ifayela le- ukubhukudaNgoba imikhumbi eminingi emikhulu ine-sauna nedamu elifudumele, futhi kungaba yihlazo langempela uma ungeke uzithokozele lezi zikhungo ngenxa yephutha elinjalo lobuwula.
Faka ipotimende isikhwama esingenalutho noma ubhakaUzobona ukuthi ekubuyeni kwakho kugcwele izinkumbulo nezinto kanye nezipho. Kuwubuwula ukumelana nesilingo. Futhi, futhi izikhathi eziningi asicabangi ngakho, kuhle ukuthatha okumbalwa amapulagi endlebe, uma kungenzeka kube nomsindo othile egumbini elingakuvumeli ulale, noma ukukusindisa kwi-otitis echibini, awusoze wazi.
Siyethemba ukuthi sikusizile ngalezi zeluleko, kepha uma usafuna ukwazi kabanzi ngokuthi ungayilungisa kanjani imithwalo ephelele, chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izikebhe ze-Absolut » General » Amathiphu » Yini okungafanele uyikhohlwe ngosuku olwandulela olwandle?
Yiziphi izingubo okufanele ngizithathe ku-cruise? Ngifaka konke esikhwameni?
Konke ongakwenza ukuzijabulisa lapho ugibela i-cruise